अथियालाई सलमानको दोश्रो साथ ! « Ramailo छ
अथियालाई सलमानको दोश्रो साथ !
बलिउड अभिनेता सलमान खान हरेक कलाकारले दोस्रो मौका पाउनु पर्छ भन्ने खाल्का अभिनेता हुन । उनले यो बोली मात्र नभएको सावित पनि गरेका छन् ।
सलमान खान र जरीन खानको अभिनय रहेको फिल्म ‘वीर’ फल्प भयो । कतिपय अवस्थामा फिल्म फल्प भएपनि कलाकार नोटिस हुन्छन तर जरीनको सवालमा यो हुन सकेन । सलमानले बलिउडमा आफ्नो स्थान बनाइसकेको हुँदा खासै फरक परेन तर जरीनको फिल्मी यात्रा नै टुगिने अवस्थामा पुग्यो । सलमानसँग फिल्म खेल्दा पनि जरीनलाई केहि फाइदा भएन । सलमानले जरीनलाई एक फिल्मको गीत अफर गरे तर गीतबाट पनि जरीन नोटिस हुन सकिन्न ।
यसैगरी सलमानले सुनिल शेट्टीकी छोरी अथियालाई ‘हीरो’ फिल्मबाट डेब्यु गराए । यो फिल्म पनि फल्प भयो । अथियाको साथै यसै फिल्मबाट डेब्यु गरेका सुरज पञ्चोलीको पनि भविष्यमा ग्रहण लाग्यो । सलमान भने, ‘अथिया निकै प्रतिभाशिल केटि हो त्यसैले उनलाई दोस्रो मौका दिन्छु ।’ उनले ‘भारत’ र ‘दबंग ३’ कुन हो भनेर खुलाएका छैनन् ।